Ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo dia manala ny fitsapana fiarovana. Vaovao momba ny cruise industry
Vaovao momba ny indostrian'ny cruise • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Other • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Vaovao momba ny fitaterana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao mivalona • News News
Ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo dia manala ny fitsapana fiarovana
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny indostrian'ny cruise » Ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo dia manala ny fitsapana fiarovana
Ny fandalinana vao haingana momba ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-dranomasina sy ny krizy fizahan-tany dia nanambara ny tsy fahombiazan'ny rafitra eo amin'ny sehatry ny indostrialy ny fahatakarana ny valanaretina COVID-19. Hatramin'ny (ary ao anatin'izany) ny taona 2019, ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo dia sehatra mihamitombo haingana indrindra amin'ny sehatry ny fizahantany. Tamin'ny taona 2018, ny totalin'ny anjara biriky ara-toekarena (mivantana, tsy mivantana ary an-tsokosoko) an'ny fizahan-tany fitsangantsanganana mankany amin'ny toekarena manerantany (amin'ny alàlan'ny entambarotra sy serivisy) dia $ 150 miliara, miaraka amin'ny asa manontolo andro 1,177,000.
Na izany aza, ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo dia indostrian'ny mora krizy ary manoloana ny areti-mandringana COVID-19 sy ny fipoahan'ny Diamond Princess sy ny Grand Princess, ireo sambo fitsangantsanganana lehibe dia mampatsiahy antsika ny sarivongan'ilay nofin'i Nebokadnezara: goavana sy manaitra, sarivongana manaitra, mahatalanjona ny fisehoany, fa ny tongony kosa vita amin'ny tanimanga nendasina.
Tsy vaovao ny krizy mifandraika amin'ny sambo fitsangantsanganana. Tamin'ny 1912 dia nilatsaka vaovao ny nilentahan'ny Titanic ary mitohy ny famerenana sy ny fanakianana azy. Tamin'ny 1915 dia nilentika tao amin'ny seranan-tsambon'i Chicago ny SS Eastland izay namono ny 840 tamin'ireo mpandeha 2500. Tamin'ny taona 2005 dia notafihan'ny jiolahin-tsambo ny Seabourn Spirit teny amoron'ny morontsirak'i Somalia, ary tamin'ny 2010, ny Splendor (iray amin'ireo sambo lehibe indrindra an'ny Karnaval) dia niaina doro maotera niandry mpandeha nandritra ny efatra andro tsy nisy herinaratra.
Misaotra ny norovirus marobe ireo mpandeha sambo mpitondra karnavaly no narary:
1. 2009, Coral Princess: 271 marary
2. 2010, Princess Princess: marary 396
3. 2012, Masindahy Masoandro: 216 marary
4. 2013, Ruby Princess: 276 marary
Tamin'ny taona 2014, ny Explorer of the Seas dia niondrana an-tsambo niverina nankany New Jersey niaraka tamin'ireo niharan-doza norovirus efa ho 650 feno ny maloiloy sy fivalanana. Ny mpandeha sy ny ekipa tao amin'ny Celebrity Mercury dia nijaly noho ny valanaretina tamin'ny sambo dimy nifanesy tamin'ny 2000, anisan'izany ny 443 narary tamin'ny febroary 2000 sy 419 tamin'ny martsa. Ny CDC dia nanome baiko tsy fahita firy (avy eo) satria tsy nitsahatra nandeha sambo ilay sambo.
Misy vokany eo amin'ny vavony sy ny tsina ity tsimokaretina ity ary azo tsentsina amin'ny sakafo na rano maloto na amin'ny alàlan'ny fifandraisany amina olona voa. Amin'ny tranga sasany dia azo aparitaka amin'ny alàlan'ny fomba fandroana tsy madio izy io satria miaina ao anaty tain-drendrika ny mikraoba. Mety hiparitaka haingana ny viriosy, indrindra amin'ny toerana kely toa ny sambo fitsangantsanganana.
Taloha, ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo dia namaly ny krizy sasany (izany hoe ny fanafihana mpampihorohoro 9/11, ny krizy ara-bola eran-tany 2008) haingana ary nandray ny Fehezan-dalàna momba ny fiarovana ny sambo sy ny seranan-tsambo (Code ISPS Code), manome drafitra hamahana ireo olana momba ny fiarovana. sy filaminana. Taorian'ny 9/11 Abercrombie & Kent, ilay orinasam-pizahan-tany mihaja izay mitazona dock tsy miankina manamorona an'i Neily, dia nametaka mpamantatra vy sy fiarovana amin'ny akanjo tsotra amin'ny sambony. Ny fiaramanidina Royal Caribbean sy ny Celebrity Cruises dia nametraka mpitandro ny filaminana mpiasan'ny miaramila taloha, anisan'izany ny mpikambana ao amin'ny tafika Israeliana manokana, ny tafika an-dranomasina anglisy ary ny Gurkhas Nepaley ao amin'ny sambony. Ireo sambo ireo dia nisy koa fantsom-pandrehitra afo, taratra radar ary jiro fikarohana mahery vaika (hametrahana jamba mety hanafika) hiarovana ireo mpandeha. Ho valin'ny krizy ara-bola tamin'ny 2008 dia nampihena ny vidin'ny sambo fitsangantsanganana (manarona ny vidin'ny asa) ary mifantoka amin'ny fanitarana ny vola miditra.
Taitra, fanantenana ary fandroahana demony
Inona no tsy itovizany amin'ny COVID-19? Avy amin'ny rivotra io virus io ary afaka mijanona mandritra ny ora maro. Toa tsy nahavita nitantana ny tontolo iainany ilay indostria, voatery niditra an-tsehatra ny governemanta manerantany, ka niafara tamin'ny fanerena (na fanolorana mafy) ny fanidiana, ny fanalavirana ara-tsosialy, ny fivezivezena voafetra ary ny fifehezana hafa momba izay mety sy tokony hataon'ny indostria. atao.
Ny mpitarika politika miaraka amin'ireo mpitantana ny governemanta sy ireo tompon'andraikitra misahana ny sambo fitsangantsanganana an-tsokosoko dia namoaka torolàlana momba ny famahana sy ny fanitsiana ny areti-mandringana raha toa kosa ny torolàlana fanampiny dia avy amin'ny asa fitsaboana ara-pahasalamana manerantany (ie, WHO). Ny vokany? Nikoropaka ny valiny ny rehetra, nampiany fisafotofotoana sy fampahalalana diso tamin'ny tambajotram-pifandraisana siantifika malemy izay namboarina nandritra ny efa-taona nanjakan'i Donald Trump ny Trano Fotsy sy ny fitantanan'ny mpitarika ny OMS.
Raha vao hita tao amin'ny Princess Princess sy ny Grand Princess ny viriosy, ny tsy fisian'ny drafitra fikojakojana dia nampitombo ny aretina ho krizy mifandraika amin'ny fahasalamana izay tsy nisy toa izany teo amin'ny orinasan-tsambo iray mankany amin'ny indostria iray manontolo.
Ny fanafihana viriosy tamin'ny sambo fitsangantsanganana sy ny fiaramanidina tamin'ny volana martsa 2020 dia nanova ny indostria mandrakizay, nijanona ary avy eo nampiato ny Princess Cruises, Disney Cruise Line, Viking, tsipika Cruise Norveziana, Royal Caribbean, Carnival Corporation ary MSC Cruises. Ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) dia namoaka didim-pitondrana tsy misy sambo mandritra ny 100 andro farafahakeliny ho an'ireo sambo fitsangantsanganana rehetra izay mitondra mpandeha mihoatra ny 250, manitatra ny kaomandy No Sail ka hatramin'ny 31 Oktobra 2020. Ny Azamara, zotra fitsangantsanganana kely sambo mihantona mandra-pahatapitry ny taona 2020. Nofoanana ihany koa ny karnaval rehetra avy any Etazonia hatramin'ny faran'ny taona 2020; na izany aza, mikasa ny hiverina hiasa indray ny olo-malaza amin'ny volana novambra 2020 ary mitohy ny sambo avy any / mankany amin'ny seranana ivelany.
Mijaly ny indostria amin'ny fatiantoka ara-bola lehibe, miteraka tahotra ho an'ireo mpampiasa vola. Ny anjaran'ny Royal Caribbean Cruises Ltd dia nilatsaka 82.31 isan-jato, ny Cruise Line Holdings Norveziana nizara 85.17 isan-jato ary ny Carnival Corporation & Plc nizara 76.61 isan-jato tamin'ny 2 Janoary 2020 ka hatramin'ny 23 martsa 2020.
Ny fanitarana fanampiana ho an'ny sambo fitsangantsanganana dia nampiady hevitra. Ny tsipika fitsangantsanganana telo lehibe dia tafiditra ao amin'ilay antsoina hoe "firenena madiodio mitovy", izay tsy takian'izy ireo mandoa ny hetra 21 isan-jato ampanaovin'ny orinasa amerikana. Raha ohatra, ny Carnival, orinasam-pitaterana an-tsambo amerikana lehibe indrindra, nifindra avy tany amin'ny seranan-tsambo ivelany (ie, Panama) nankany Etazonia, dia voatery nandoa hetra mitentina 600 tapitrisa dolara amerikanina izy ireo noho ny fidiram-bolany $ 3 miliara (2019) , ka inoana fa tsy hifindra toerana atsy ho atsy izy ireo.
Tamin'ny volana septambra 2019, ny Banky Federal Reserve dia nampiditra $ 400 miliara dolara ary teo anelanelan'ny volana martsa sy jolay 2020, dia nanindrona $ 7.4 trillion fanampiny ho an'ny tsenan'ny fifanarahana fanavotana. Amin'izao fotoana izao dia misy sambo vaovao miisa 122 miverina amin'ny ranomasina mandrapahatongan'ny taona 2027, miaraka amin'ny sandan'ny $ 68.4 miliara mitaky ny maha-mora ny sambo fitsangantsanganana tena marefo.
Ny hatao? Torohevitra ICV
Nanomboka tamin'ny 2006, ny fikambanana International Cruise Victims (ICV), alika mpiambina mpitsoa-ponenana tsy mitady tombom-barotra misolo tena ireo traboina mahatsiravina eny an-dranomasina, ao anatin'izany ny heloka bevava (izany hoe herisetra ara-nofo), serivisy ara-pitsaboana tsy ampy, lozam-pifamoivoizana, fanjavonana mistery, afo , sambo voafintina, ary fiparitahan'ny aretina mahafaty, dia nanara-maso sy niaro ny fiarovana, fiarovana ary ny fandraisana andraikitra amin'ny sambo sambo.
Ny ICV dia nanolotra ireo dingana izay hampifantoka ireo fanamby atrehin'ity indostria ity ary mangataka ny hanolorana drafitra feno hivoahana amin'ny fandringanana akaiky amin'ny masoivohon'ny governemanta sy ny daholobe alohan'ny hamelana azy ireo handeha.
1. Famotopotorana ny tantaran'ny sambo fitsangantsanganana COVID-19 famelezana sambo maro, mifantoka amin'ny zavatra fantany, rehefa fantany izany, ary ny dingana natao hanalefahana ireo krizy
2. Famantarana olona tompon'andraikitra amin'ny "fanapahan-kevitra hanafina ny vaovao amin'ny mpandeha sy ny besinimaro"
3. Raiso ny andraikitra feno ary ampamoaka, amin'ny aretina sy fahafatesan'ny mpandeha
4. Ho fanomanana ny fidirana indray eo amin'ny tsena, ny làlan'ny fitsangantsanganana dia tsy maintsy, "mamorona politika feno pitsopitsony tohanan'ny siansa amin'ny fiatrehana ny valan'ny COVID-19, hiantohana ny mpandeha fa manaraka ny torolàlana momba ny fahasalamam-bahoaka navoaka isaky ny faritra iasan'izy ireo. , ao anatin'izany, fa tsy ferana amin'ny:
• Politika alohan'ny fidirana an-tsambo, an-tsambo, fitsangantsanganana ary ny fidinana an-tsambo
• Fizahana ara-pahasalamana tsy maintsy atao alohan'ny sy mandritra ny fiandohana
• Faritra Quarantine natokana ho an'ny mpandeha sy ny ekipa amin'ny faritra samihafa
• Fitsangatsanganana an-dranomasina voafetra hiarovana ny fahasalaman'ny vondron-tseranana
• Fepetra hiantohana ny halaviran'ny vatana
• Mihena ny fahafahan'ny vahiny tsy mihoatra ny 40 isan-jaton'ny fahafaha-miasa mandra-pahafaky ny vaksinin'ny COVID-19
• Toerana fisakafoanana an-kalamanjana sy fanesorana ny safidinao rehetra
• Fepetra ahazoana antoka ny fanaraha-maso ny aretina sy ny fanatsarana ny fidiovana, mamela fotoana fanampiny eo anelanelan'ny fihodinan'ny sambo
• Fitsapana valin'ny valiny haingana
• Fametrahana sivana H13 HEPA
• Mpiandraikitra ny fanarahan-dalàna COVID-19 mahaleo tena (C19CO) tompon'andraikitra amin'ny fametrahana sy fanamafisana ireo paikady fiarovana, mpiasa mampiofana, fanaraha-maso ary fitaterana ny tsy fanarahan-dalàna
• Fitaovana sy fitaovam-pitsaboana nohatsaraina
• Fampitomboana ny mari-pahaizana momba ny mpiasa sy ny fanofanana
Jamie Barnett, ny filohan'ny ICV dia nanambara fa: "Ny famelana ny sambo fitsangantsanganana hitanjozotra nefa tsy hihaona amin'ity mason-tsivana ity dia hanao sonia ny taratasy famonoana ho faty tsy ny maro amin'ireo mpandeha sy mpandeha azy fotsiny, fa olona an'arivony kosa no voatery nifandray tamin'izy ireo rehefa niverina izy ireo. Raha tokony hiahiahy momba ireo olona eo ambany fiandraiketan'izy ireo eny an-tsambo izy ireo, ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo dia manahy ny amin'ireo tompon'izy ireo. Ary raha tokony hianatra sy hanitsy ny hadisoana mahafaty nataony izy ireo dia manohy mamerina izany mandra-pijanonany mafy. ”
Miharihary fa mandany fotoana, vola ary ezaka bebe kokoa amin'ny fifandraisana amin'ny besinimaro, dokam-barotra ary fampiroboroboana ny fiarovana ireo mpandeha an-tsambo. Hoy i Barnett: “Isaky ny misy valanaretina hafa na tranga hafa azo antoka dia ampahatsiahivina isika fa ny hetsika fitsangantsanganana an-tsambo dia ny fifandraisan'ny besinimaro fa tsy ny filaminam-bahoaka.” Ny fikambanana dia mikatsaka hetsika azo tsapain-tanana izay haneho ny fahavononany amin'ny fiarovana ny mpandeha, "Fotoana izao handinihan'ity indostria ity fepetra ilaina amin'ny laoniny mba hamerenany ny fotokevitra ifotony sy ny laharam-pahamehana. Efa elaela izao. ”
Nahazo ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo ny sain'ny media manerantany ity taona ity; kely no nety. Satria miasa ao anaty rano manjavozavo ny sambo izay fehezin'ny governemanta fehezin'ny governemanta mamela ny tsy fitoviana ary (amin'ny tranga maro) fomba tsy azo antoka, COVID-19 dia nanambara ny fahalemena lehibe eo amin'ny indostria sy ny rafitra manafina sy / na tsy miraharaha ireo andraikitra ara-dalàna, ara-tsosialy ary etika. ary manandrana manafoana ny fandraisana andraikitra sy ny fahamelohana.
Hitan'i Barnett fa, "Ny lazany sy ny fahatokisan'ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo," dia entina handray andraikitra amin'ny hetsika sy ny tsy fanaovany asa. "Ny tombony azo dia ny fahaveloman'ny orinasa ity, izay tokoa, tsy filàna fa rendrarendra. Ny tsy fanajana ny fiarovana sy ny fahasalaman'ny ekipa sy ny mpandeha dia hiafara amin'ny famotehana ny indostria. Hahita fomba hafa fialan-tsasatra ny olona. Toerana hafa atokisany. Toeran-kaleha hafa izay hidika izany rehefa milaza izy ireo fa ny fiarovana no laharam-pahamehany indrindra. ”
Ho fampahalalana fanampiny: https://www.internationalcruisevictims.org